Haweenay La Takooray Oo Milyan Dollar Ku Heshay Magdhow – Heemaal News Network
Shirkadda Uber ayaa lagu amray inay siiso $ 1.1m (£ 795,000) haweeney indhoole ah oo loo diiday in ay raacdo gawaadhidooda 14 jeer.
Lisa Irving waxay tiri mararka qaar, darawallada waxay ahaayeen kuwo hadalo aflagaado ah igu yidhaahda, ama ku dhibaateeya sidii ay ugu qaadi lahaayeen gaardhiga eyga hagaya, ee Bernie.
Mid ka mid ah darawallada ayaa la sheegay in uu soo gaabisyy safarkeedii ka dib markii ay si been ah u gu sheegay in ay timid meeshii ay u socotey.
Garqaade madax banaan ayaa xukumay Uber wadayaasheeda inay si sharci daro ah ku takooreen iyaga oo u eegaya xaaladdeeda darteed.
Waxay diiday sheegashada Uber ee ah in shirkadda lafteedu aysan masuul ka ahayn, maxaa yeelay, waxay ku doodday, darawalkeedu wuxuu lahaa xaalad qandaraasleyaal halkii uu ka ahaan lahaa shaqaalaha.
Mrs Irving, oo ka timid San Francisco, ayaa sheegtay inay ka walwalsan tahay amnigeeda ka dib markii ay ku xannibantay dhowr jeer xilli dambe habeenkii sababo la xidhiidha diidmada darawallada.
Waxay sidoo kale ku eedeysay in safarada la joojiyay ay sidoo kale keeneen inay ka daahdo shaqada, taasoo gacan ka gaysatay in shaqada laga eryo.
Afhayeen u hadlay Mrs Irving ayaa yidhi: “Dhamaan dadka Mareykanka ah ee ay tahay inuu xoreeyo kacaanka tagaasidu, dadka indhoolayaasha ah iyo kuwa araga naafada ka ah waxay ka mid yihiin kuwa u taagan inay sida ugu badan uga faa’iideystaan.”
Qeybta ugu hooseysa ayaa ah sida uu qabo sharciga Naafada Mareykanka, in eyga hagayaa uu awood u leeyahay inuu aado meel kasta oo qof indhoole ah uu aadi karo.
Hadal ay u soo saareen warbaahinta xukunkaas ka dib, afhayeen u hadlay Uber wuxuu ku sheegay in shirkaddu ay “ku faanayso” caawimada ay siiso rakaabka indhoolayaasha ah.
Darawallada adeegsada barnaamijka Uber-ka waxaa laga filayaa inay u adeegaan macaamiisha iyo xayawaanaadka u adeega ayna u hogaansamaan marin u helka iyo sharciyada kale, waxaana si joogto ah u siineynaa darawallada barashada masuuliyaddaas.
“Kooxdayada u heellan waxay eegaan cabasho kasta waxayna qaadaan tallaabada ku haboon,” ayay shirkaddu raacisay xogta ka soo baxday.
Ma ahan markii ugu horreysay ee Uber ay wajahdo dagaal sharciyeed oo kaga yimi bulshada indhoolayaasha ah.
Sannadkii 2014, Xidhiidhka Indhoolayaasha Qaranka ee Mareykanka ayaa dacweeyay barnaamijkooda ku saabsan xeerarka eyga hagaha ah.
Kiiska waxaa la xaliyay sanadkii 2017 markii Uber ay ogolaatay inay hubiso in wadayaasheeda ay ogaadeen inay sharci ahaan waajib ku tahay inay u adeegaan dadka iyo eyda hagaysaba.Waan ka xumahay inay tan dhacdo, ayay Mrs Irving u sheegtay wargeyska San Francisco Chronicle.
“Waxaan jeclaan lahaa in la ixtiraamo xuquuqdayda madaniga ah. Laakiin waxay diraysaa farriin culus oo ah in tan aan la aqbali karin.” ayay ku sidoo kale tidhi.
Alshabaab Oo Sheegatay Masuuliyadda Qarax Ka Dhacay Gobolka NFD
Uber Drivers Refused Rides To A Blind Woman And Her Guide Dog. Now The Company Must Pay Up
Heemaall April 7, 2021 April 7, 2021
Booliska Somaliland Oo Dilay Libaaxi Gabadha ku Dhaawacay Hargaysa.
Heemaall April 30, 2021